Baarlamaanka oo guda galay codeynta mooshinka ka dhanka ah Xukuumadda – Radio Muqdisho
Mudanayaasha Baarlamaanka Federaalka ah ee Soomaaliya oo kulan uga socda xarunta Golaha Shacabka ayaa waxa ay iminka bilaabeen cod u qaadidda mooshinka ka dhanka ah xukuumadda oo ay Xildhibaanada u soo gudbiyeen qaar ka mid ah mudanayaasha Baarlamaanka.
Fadhiga baarlamaanka oo ku furmay 211 Xildhibaan ayaa tirada waxa ay hadda noqdeen 235 mudane, waxaana codeynta ay u dhaceysaa mid saf saf ah, si loo helo tirada saxda ah ee codeysay.
Kulanka Baarlamaanka ee maanta oo uu shir guddoominayo Afhayeenka Baarlamaanka mudane Maxamed Sheekh Cismaan “Jawaari” ayaa la filayaa in uu ku dhawaaqo natiijada marka ay soo gabo gabowdo codeynta.
Wixii ku soo kordha waan idin la socodsiin doonnaa hadduu Alle idmo.
Baarlamaanka oo bilaabaya codeynta mooshinka ka dhanka ah Xukuumadda
Tababar ku saabsan canshuur uruurrinta oo ka furmay Muqdisho "SAWIRRO"